HTC Myanmar Sar - IT-KOKO
HTC ဆိုဒ်မှာ မြန်မာဘာသာနဲ့ official ဆိုဒ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်က HTC ရဲ့ CEO Peter Chou မြန်မာနိုင်ငံကို လာပြီး ပြောင်းလဲလာတဲ့ မြန်မာ မိုဘိုင်းလောက အခြေအနေပါ။ လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပေါ့။ ကျွန်တော်တို့တွေ မြန်မာလို ဖတ်လို့ရတယ်လေ။ နောက်ပြီး ဖုန်းမှာလည်း built-in မြန်မာစာတွေ၊ ကီးဘုတ်တွေ ထည့်ပေးမယ်လို့ ကြားနေရတယ်။ SanMyanmar နှင့် ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ကိုင်မယ်လို့ ကြားသိရတယ်။ ဒါလည်းကောင်းတာပါဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံက အသုံးပြုသူတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ တိုးတတ်မှုကြီးပေါ့။ မြန်မာစာမြင်ရဖို့ root လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး။ ဆိုင်သွားပြီး အကိုရေ ဖောင့်သွင်းပေးပါ ပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ developer တွေလည်း အချိန်ကုန်ခံပြီး ကီးဘုတ်တွေ၊ root လုပ်နည်းတွေ ဖောင့်သွင်းတာတွေ လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ အဲ့ဒါမျိုးကို တိုးတတ်ပြောင်းလဲလာတယ်လို့ ပြောတာပေါ့နော်။
ကျွန်တော်ကတော့ တော်တော်လည်း စိတ်လေသွားတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ က သူတို့အကျိုးအမြတ်ရဖို့ လုပ်မယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပါ။ အဲ့ဒါကို မှားတယ်လို့ ကျွန်တော် မပြောလိုပါ။ မှန်ပါတယ်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ မှန်ပါတယ်။ End-User တွေက သူတို့သုံးရတာ အစဉ်ပြေရင် သုံးမှာဘဲ။ ဝယ်မှာဘဲ။ နည်းပညာတိုးတတ်တာ၊ မှန်တာ၊ မှားတာ၊ Standard ဖြစ်တာ၊ မဖြစ်တာ ဘားမှာ စဉ်းစားမနေဘူး။ ပိုက်ဆံပေးလိုက်တယ်၊ သုံးလို့ အစဉ်ပြေတယ်။ အဲ့ဒါဆိုပြီးပြီလေ။ အဲ့အချက်ကို စီးပွားရေး သမားတွေက ကောင်းကောင်းသိတယ်။ အဲ့ဒါကို ကြည့်ပြီး ဈေးကွက်ချဲ့တာဘဲ။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ HTC ဖုန်းတွေ အားလုံးကိုင်ကြတော့မယ်ဆိုတာ။ ဘာလိုလဲဆိုတော့ မြန်မာလိုပါတယ်၊ မြန်မာလိုမြင်ရတယ်။ မြန်မာလို ရိုက်လို့ရတယ်။ လိုအပ်ရင် မြန်မာလို ဝက်ဆိုဒ်မှာ ရှာလို့ရတယ်။ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ရွှေဘဲပေါ့။ အဲ့ဒါမျိုးကို တိုးတတ်လာတယ်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ နည်းပညာတော့မဟုတ်ဘူး၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေး တိုးတတ်လာတာဘဲ။ နည်းပညာပိုင်းတိုးတတ်ဖို့ အဲ့ဒါတွေ ပြောင်းလဲသွားတာ၊ သုံးသူတွေ အစဉ်ပြေတာ တွေနဲ့ တိုင်းတာလို့မရဘူးလို့ထင်တယ်။ Market Share တွေတိုးသွားတာဘဲ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတတ်သွားတယ်လို့ ပြောလို့မှမရတာ။ ကျွန်တော့အထင်တော့ အားလုံးနားလည်းသဘောပေါက်တဲ့ Standard မရှိဘဲနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ယှဉ်လို့မရဘူးထင်တယ်။ လူတွေကို စွဲဆောင်တဲ့ Marketing Trick အခြေအနေ တစ်ခုကို ဒါ စစ်မှန်လို့ သူတို့ယူသုံးတယ် လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။
အဲ့တော့ Developer တွေအတွက်ကရောဗျ? အသုံးများတဲ့ သူတွေအနောက်လိုက်ပြီး လုပ်မှာလား? စစ်မှန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေပေါ်မှာ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမလား? သေချာတာကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက စစ်မှန်တာ၊ မမှန်တာထက် အသုံးများတာ ကိုပိုပြီး ကြည့်မယ်ထင်တယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ မှန်လည်းမှန် လူကြိုက်လည်းများတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲလို့ မျှော်လင့်ရင် ကျွန်တော့ အတွေး၊ ကျွန်တော့အထင်ကို ဒီမှာဘဲ ရပ်လိုက်ပါတော့မယ်။
Finally… Redmi – Another Cheap Phone
Chromebook is good enough for her!
Good News for iOS7users!